Bible Mu Nsɛm Yesu Sa Ayarefo Yare - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
BERE a Yesu tutuu akwan wɔ ɔman no mu no, ɔsaa ayarefo yare. Wɔkaa anwonwade ahorow yi ho asɛm wɔ nkurow ne nkuraa nyinaa ase. Enti nkurɔfo de abubuafo ne anifuraefo ne asotifo ne ayarefo afoforo pii baa ne nkyɛn. Na Yesu saa wɔn nyinaa yare.
Ná bɛboro mfe abiɛsa atwam fi bere a Yohane bɔɔ Yesu asu. Na Yesu ka kyerɛɛ n’asomafo sɛ ɛrenkyɛ ɔbɛkɔ Yerusalem, baabi a wobekum no. Nanso Yesu kɔɔ so saa nkurɔfo yare.
Da koro bi na Yesu rekyerɛkyerɛ Homeda. Na Homeda yɛ da a Yudafo mfa nyɛ adwuma. Ɔbea a wuhu wɔ ha no ayare paa. Bɛyɛ mfe 18 ni na ne mu akom, a ontumi nteɛ ne mu. Enti Yesu de ne nsa guu ɔbea no so, na ɔbea no fii ase teɛɛ ne mu. Ne ho atɔ no!
Eyi maa nyamesom mpanyimfo no bo fuwii. Wɔn mu biako teɛɛm ka kyerɛɛ nnipadɔm no sɛ: ‘Nnansia na ɛsɛ sɛ yɛde yɛ adwuma. Saa da no na obetumi asa yare, ɛnyɛ Homeda!’
Nanso Yesu buae sɛ: ‘Abɔnefo. Mo mu biara bɛsan n’afurum ma wakɔnom nsu Homeda. Na ɔbea yi a ɔyɛ mmɔbɔ, a wayare mfe 18 yi de, ɛnsɛ sɛ wɔsa no yare Homeda?’ Mmuae a Yesu mae no maa saa nnipa bɔne yi ani wui.
Akyiri yi Yesu ne n’asomafo siim sɛ wɔrekɔ Yerusalem. Bere a woduu Yeriko no, anifuraefo baanu tee sɛ Yesu retwam. Enti wɔteɛteɛɛm sɛ: ‘Yesu, boa yɛn!’
Yesu frɛɛ anifuraefo no bisaa wɔn sɛ: ‘Dɛn na mopɛ sɛ meyɛ ma mo?’ Wɔkae sɛ: ‘Awurade, ma yɛn aniwa mmue.’ Yesu de ne nsa kekaa wɔn ani, na amonom hɔ ara wohuu ade! Wunim nea enti a Yesu yɛɛ eyi nyinaa? Efisɛ na ɔdɔ nnipa, na na ɔpɛ sɛ wogye no di. Enti sɛ odi so sɛ Ɔhene a, obiara renyare bio.
Dɛn na Yesu yɛe bere a otutuu akwan wɔ ɔman no mu no?
Yesu asubɔ akyi mfe abiɛsa no, dɛn na ɔka kyerɛ n’asomafo no?
Henanom ne nkurɔfo a wɔwɔ mfonini no mu no, na dɛn na Yesu yɛ maa ɔbea no?
Adɛn nti na mmuae a Yesu de mae wɔ nyamesom mpanyimfo no kasatia ho no maa wɔn ani wui?
Bere a Yesu ne n’asomafo no bɛn Yeriko no, dɛn na Yesu yɛ maa anifuraefo baanu a wɔsrɛsrɛ ade no?
Adɛn nti na Yesu yɛɛ anwonwade ahorow?
Kenkan Mateo 15:30, 31.
Yehowa tumi a ɔde yɛ ade anwonwa kwan so bɛn na wɔnam Yesu so daa no adi, na ɛsɛ sɛ ɛka ntease a yɛwɔ wɔ wiase foforo ho bɔ a Yehowa ahyɛ no wɔ ɔkwan bɛn so? (Dw. 37:29; Yes. 33:24)
Kenkan Luka 13:10-17.
Ɔkwan bɛn so na nokwasɛm a ɛyɛ sɛ Yesu yɛɛ n’anwonwade ahorow a ɛsen biara no bi Homeda no ma yehu ogye ko a ɔde bɛbrɛ adesamma wɔ ne Mfirihyia Apem Nniso no mu? (Luka 13:10-13; Dw. 46:9; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Adi. 21:1-4)
Kenkan Mateo 20:29-34.
Ɔkwan bɛn so na saa kyerɛwtohɔ yi da no adi sɛ Yesu nyɛ obi a onni adagyew sɛ ɔbɛboa nnipa, na dɛn na yebetumi asua afi eyi mu? (Deut. 15:7; Yak. 2:15, 16; 1 Yoh. 3:17)